Fonosana sy lojika - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ao amin'ny Pandawill, ny takelaka rehetra dia hasiana tombo-kase ao anaty kitapo mazava sy mangarahara nefa tsy ampidirina ao anaty hafanana hafa intsony ny ao anatiny, ary amin'ny fomba iray azo sokafana ny fonosana nefa tsy misy fery ara-batana amin'ireo takelaka ao anatiny.
Betsaka ny tombony azo avy amin'ity fomba famonosana ity:
✓Mazava ny fonosana ary azo atao tsara ny manara-maso na mijery takelaka amin'ny an-tsipiriany nefa tsy manala fonosana ilay fonosana ary manery ireo tabilao hikarakara bebe kokoa na hamoaka azy ireo amin'ny loto sy hamandoana.
✓Ny kitapo dia azo sokafana mora amin'ny hety na ny elatra fa tsy voaviravira, ary vantany vao tapaka ny banga dia manjary malalaka ny fonosana ary azo esorina ireo takelaka raha tsy atahorana ny depanelisation na simba.
✓Ny kitapo misy takelaka dia azo ampiasaina indray hamehezana ny habetsany, ka hampiakatra ny fiainana ao anaty ao anatiny.
✓Ity fomba famonosana ity dia tsy mitaky hafanana satria voaisy tombo-kase ny kitapo ary noho izany ny tabilao dia tsy iharan'ny fizotran'ny hafanana tsy ilaina.
✓Mifanaraka amin'ireo fanoloran-tenantsika momba ny tontolo iainana ISO14001, ny fonosana dia azo ampiasaina indray, na averina na voaverina 100%.
Betsaka ny safidy fandefasana ho anao dia miankina amin'ny vidiny, ny fotoana ary ny habetsanao.
By Express: amin'ny maha mpanondrana lehibe anay, dia nametraka fifandraisana tsara amin'ireo orinasa mazava izahay. Ireo dia natao indrindra ho an'ny vokatra kely, famakiana fotoana. Ankoatry ny kaonty fandefasana anay dia azonay alefa amin'ny kaontinao izany.
Amin'ny alàlan'ny rivotra:
By Air dia ekonomika raha ampitahaina amin'ny express ary haingana noho ny amin'ny ranomasina izy. Matetika ho an'ny vokatra volume medium.
Amin'ny ankapobeny ho an'ny famokarana betsaka sy ny fotoana itarihana dia tsy maika. Ary io no fomba fandefasana lafo indrindra.